Al-Shabaab oo la sheegay inay heleen gantaalaha lidka diyaaradaha ee SAM-7 – SBC
Al-Shabaab oo la sheegay inay heleen gantaalaha lidka diyaaradaha ee SAM-7
Posted by editor on March 5, 2012 Comments
Iyadoo maalinimadii shaley xoogaga Al-Shabaab ee dhawaan Al-Qaacida la midoobay ay gantaalo ku weerareen laba diyaaradaha khumaatiga u kaca (Helicopters) oo duulimaad ku marayey hawada deegaanada Garbaasleey iyo Ceelasha Biyaha ayaa waxaa soo baxaysa faahfaahin arintaasi la xiriirta gaar ahaan nooca uu yahay gantaalka Shabaabku adeegsadeen.
Afhayeen u hadley Al-Shabaabka wuxuu qiray inay heleen gantaalaaha lagaga hortago diyaaradaha dagaalka isagoo sheegay in ganataalahaasi au adeegsanayaan dagaalka ay ka wadaan Soomaaliya ayna la beegsan doonaan diyaaradaha sida uu sheegay “cadowga”.
Hadaba warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya noocyada ganaatalaha ay adeegsanayaan Shabaabku iyadoo sidoo kale uu soo baxay war ku aadan halka ganataalahaasi ka soo galeen kooxdaasi.
Telefishinka Sky News ee fadhigiisu yahay magaalada London war uu baahiyey bishii February ee aynu soo dhaafnay wuxuu kaga hadley warar uu helay oo ku aadan in ugu yaraan 30 gantaalaha lidka diyaaradaha ay heleen xoogaga Shabaabka kuwaasi oo hubkaasi uga yimid wadanka Liibiya ka dib markii ay dhacdey xukuumadii Muammar Gaddafi.
Telefishinka oo soo xiganayey warar dhanka mukhaabaraadka oo ka soo gaaray magaalada Muqdisho iyo sirdoonka reer Galbeedka waxay sheegeen in gantaalada ‘SAM 7’ eegarbaha laga rido garabka lana mid ah gantaalkii loo adeegsadey weerarkii 10 sano ka hor lagu qaaday diyaarad Isra’il laga leeyahay oo ka kacdey garoonka diyaaradaha Kismaayo ay soo gaareen xoogaga Shabaabka, iyadoo hubkaasi uu ka degay dekada Magaalada Kismaayo.
Qaar ka mid ah sirdoonka reer Galbeedka ayaa walaac weyn ka muujiyey in gantaalahaasi ay dhici karto in loo gudbiyo dalka Kenya ama wadamada kale ee Geeska Afrika kuwaasi oo loo adeegsan karo weeraro, waxaase qatarta ugu weyn soo wajahaysaa ciidamada Kenya ee hawlgalka ka wada Koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo diyaaradahooda dagaalka ee ciidamada cirka iyo kuwa khumaatiga u kaca ay u noqon karaan bartilmaadeed gantaalahan.
Sky News wuxuu xusey in ay jirto cabsi kale oo laga qabaa in loo adeegsado weeraro lala beesado diyaaradaha ganacsiga iyadoo taasi noqon karto aargoosi ku aadan hawlgalada ciidamada AMISOM ee ka socda Burundi iyo Ugandha oo Shabaabka awood uga saarey magaalada Muqdisho.
Telifshinku wuxuu intaasi sii raaciyey in sheegay in ganataalahaasi ay ka mid ahaayeen hubkii laga boobay bakhaaradii hubka ee dawladii Col. Qadaafi isla markaana Soomaaliya la geeyey iyadoo si qarsoodi ah loo galiyey Soomaaliya.
Bishii February golaha amaanka ee Qaramada Midoobay waxay isku raaceen in la balaariyo ogolaanshaha hawlgalka ciidamada AMISOM isla markaana ciidamadaasi la gaarsiiyo17,700 waxaa ka mid ah qaraarkaasi in ciidamada AMISOM adeegsan karaan diyaaradaha khumaatiga u kaca ee loo yaqaan Helicopters si ay u wiiqaan awooda Al-Shabaab.
Laakiin adeegsiga diyaaradaasi awood waxaa si weyn hoos ugu dhigi kara hadii xoogaga Shabaabku adeegsadaan gantaalaha SAM7 ee haatan la sheegay inay heleen sida ay sheegayaan qurubarada dhanka dagaalka.
“War uma hayno habka ay u shaqeeyaan gantaalahaasi, waxaa jirta rajo oo ku aadan inaanay ku shaqeyn batariyada, laakiin inagu waxaan u qaadanynaa kuwa shaqeyn kara, waxaana haynaa warar la isku haleyn karo oo ku aadan in hubkaasi uu yaal magaalada Kismaayo” sidaasi waxaa yiri diblumaasi sare oo ku sugan Muqdisho oo diiday in magaciisa la sababo uu ku macneeyey xasaasiyada warkan uu leeyahay.
Dhinaca kale weerarkii shaley lagu qaaday diyaaradaha ciidamada AMISOM dadka deegaanada Garasbaaley iyo ceelasha biyaha ayaa sheegay in laba diyaaradood oo joog hoose ku duulayey ay la kulmeen weerar dhanka gantaalaha, iyadoo qaar ka mid ah dadkaasi sheegeen inay arkayeen diyaaradaha oo cararay iyo gantaal raacdeysanaya.
Guuuul gaaladi waa udhamaatey